Tag: ọdịda peeji | Martech Zone
Tag: ọdịda peeji nke
Saịtị ekwentị: Mepụta webụsaịtị ọrịre ahịa na ibe ọdịda n'ime nkeji iji ekwentị gị
Satọdee, Nọvemba 27, 2021 Monday, May 16, 2022 Douglas Karr
Nke a nwere ike kpasuo ụfọdụ ndị mmadụ iwe na ụlọ ọrụ m, mana ọtụtụ ụlọ ọrụ enweghị ụdị nke na-akwado itinye ego n'ime nnukwu saịtị na atụmatụ ịre ahịa ọdịnaya. Amaara m obere ụlọ ọrụ ole na ole ka na-aga n'ụlọ ruo n'ọnụ ụzọ ma ọ bụ dabere n'okwu ọnụ iji kwado azụmahịa dị egwu. Ebe ekwentị: Mmalite ibe n'ime nkeji ole na ole azụmahịa ọ bụla kwesịrị ịhazi oge, mbọ ya na itinye ego nke onye nwe ya iji mepụta usoro ire ahịa kachasị mma iji weta.
Ibe akwụkwọ: na-anakọta ndị ndu site na ibe ọdịda na-anabata, Popups, ma ọ bụ ogwe mkpu.
Monday, November 22, 2021 Monday, May 16, 2022 Douglas Karr
LeadPages bụ ikpo okwu ọdịda nke na-enye gị ohere ibipụta ibe ndebiri, ibe ọdịda na-anabata ya na enweghị koodu ha, dọkpụrụ & dobe ndị na-ewu ihe naanị ole na ole. Site na LeadPages, ị nwere ike ịmepụta ibe ahịa n'ụzọ dị mfe, ọnụ ụzọ nnabata, ibe ọdịda, ibe mmalite, ibe mpịakọta, ibipụta ibe n'oge adịghị anya, ibe ekele, ibe ụgbọ ibu, ibe iwe, ibe gbasara m, ibe ajụjụ ọnụ na ihe ndị ọzọ… Ụdị ndebiri 200+ dị. Site na Leadpages, ị nwere ike: Mepụta ọnụnọ ịntanetị gị - mepụta
Wenezdee, Machị 3, 2021 Monday, May 16, 2022 Douglas Karr
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-etinye ụdị na ibe WordPress, nke ahụ abụghị nke kachasị mma, na-agbanwe ọdịda peeji nke. Ibe ọdịda na-enwekarị atụmatụ na uru ndị metụtara ya: Obere Mgbasa - Chee ihu maka peeji ọdịda gị dị ka njedebe nke okporo ụzọ yana obere ihe ndọpụ uche. Ntugharị, sideba, footers na ihe ndị ọzọ nwere ike ịdọpụ onye ọbịa gị. Onye na-ewu ụlọ na-enyere gị aka ịnye ụzọ doro anya iji gbanwee ntụgharị na-enweghị ndọpụ uche. Njikọ ọnụ - Dị ka a
Ndị folks na Uplers emepụtala ihe omuma mmekọrịta a, Mmiri miri emi banyere ojiji nke ihe ngosi na peeji nke ọdịda, nke na-ekpuchi etu esi abanye peeji nke yana ihe nlere dị egwu nke na-emetụta ọnụego mgbanwe. Ihe kpatara iji jiri ebe ntinye ederede Na-echekwa Keywords maka Search Organic - Site na ịmepụta peeji nke ọdịda kachasị maka engines ọchụchọ, ị nwere ike ịrịọ algorithms ma nweta okporo ụzọ kwesịrị ekwesị na peeji nke ọdịda gị. Site na-enweghị optimizing, ị nwere ike